Fomba fampivoarana sy ny haben'ny sary: ​​endri-javatra | Famoronana an-tserasera
Fampivoarana endrika sy haben'ny sary
Encarni Arcoya | 31/08/2021 12:01 | Nohavaozina amin'ny 31/08/2021 12:03 | sary
Taona maro lasa izay, ny iray amin'ireo lahasa rehefa niverina avy nanao fialan-tsasatra ianao, nanao fitsingerenan'ny andro nahaterahana, na aorian'ny krisimasy dia ny nankany amin'ny fivarotana sary hamolavola ireo sary ary hahitana ny vokany. Ny ankamaroan'izy ireo dia nakarina amina habe mahazatra, izany hoe mitovy amin'ny habe daholo. Fa amin'ny olon-kafa nofidinao taloha habe samihafa amin'ny sary mba hanasongadinana azy ireo, satria ianao handrafitra azy ireo, hahantona ho sary hosodoko, sns.
Ankehitriny dia mbola atao ihany io, na dia tsy miankina amin'ny fakantsary sarimihetsika intsony aza isika, fa ny nomerika, ary samy hafa ny endrika fampivoarana sy ny haben'ny sary. Te hahafantatra ohatrinona ianao? Aza adino izay horesahintsika manaraka.
1 Fampivoarana endrika, firy no izy?
1.2 Endrika sary nomerika
2 Ny haben'ny sary, inona ireo?
2.1 Firy ny haben'ny sary?
3 Misy fiantraikany amin'ny kalitaon'ny sary ve ny famahana sy ny megapixels?
4 Inona ny haben'ny sary azo atao pirinty?
Fampivoarana endrika, firy no izy?
Ny zavatra voalohany tokony ho fantatrao endrika fampivoarana sary dia ny hoe misy maro samihafa, ary isan-karazany. Izy ireo dia mifandray akaiky amin'ny endrika sary an-taratasy, na izay mitovy, ny haben'ny sary. Araka izany, ilay nambara ho hitanao dia:
Izy io dia mifanitsy amin'ny tahan'ny 3/2, fantatra amin'ny anarana hoe sary volafotsy. Amin'ity tranga ity, ity tahan'ny 3/2 ity dia adika ho ny sakan'ny ratsy dia roa ampahatelon'ny halavany.
Fa maninona no lazaina fa io no fomban-drazana? Eny, satria io no tena be mpampiasa. Na dia efa elaela aza, ary miaraka amin'ny teknolojia vaovao, mihavitsy ny olona sahy mamolavola ny sary manao amin'ny findainy izy ireo, ary aleony mitazona azy ireo eo amboniny, na mamindra azy ireo amin'ny solosaina, ary mahita azy ireo ao.
Ny sasany, ny zavatra ataon'izy ireo dia ny fampiasana fitaovana toy ny sarin-tsary nomerika toy ny sary, satria afaka programmerina izy ireo ka, isaky ny x, miova ny sary fa tsy mila atao tanana.
Endrika sary nomerika
Iray amin'ireo endrika mamolavola izay ampiasaina bebe kokoa hatrany no ampiasaina amin'ny sary nomerika. Tany am-piandohana, ireo dia noforonina mba ho hita amin'ny alàlan'ny efijery finday, ny solosaina na ny fahitalavitra, saingy rehefa mandeha ny fotoana dia maro ihany koa no maniry hanana an-tsary ireo sary ireo.
Amin'ity tranga ity, ny tahan'ny dia 4/3, izany hoe ny sakan'ny dia mizara ho fizarana 4 mitovy raha 3 ny haavony.
Rehefa manonta sary nomerika dia tadidio fa arakaraka ny maha avo ny résolution no manatsara ny kalitaon'ireo sary. 300 dpi no resahintsika. Ny olana dia mety hidika izany fa mavesatra kokoa amin'ny sary, izay, indraindray, tsy tohanan'ny fitaovana sasany.
Ny haben'ny sary, inona ireo?
Rehefa mieritreritra sary ianao, ny zavatra mahazatra dia izany, na mieritreritra ireo anananao amin'ny findainao ianao, fa talohan'ny sary dia nanana vatana ara-batana, ary ny ankamaroan'izy ireo manana habe mahazatra, 10x15cm, izay nahazatra anao fony ianao handeha hampivelatra azy ireo.
Fa fantatrao ve fa misy habe sary maro hafa? Ireo dia manondro ny santimetatra azony refesina, na amin'ny sakany na amin'ny lavany. Ny sary rehetra dia azo "printy" amin'ny habe samihafa, hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra.
Firy ny haben'ny sary?
Ny lisitra ny haben'ny sary rehetra dia ho, tsy mankaleo fotsiny, fa korontana tanteraka. Amin'ny farany dia tsy ho fantatrao amin'ny isa marobe ary hiafara amin'ny fisafidianana ireo izay toa anao nefa tsy fantatrao hoe izay no tsara indrindra sa tsia.
Amin'ny ankapobeny dia afaka milaza izany aminao izahay ny habe mahazatra sy be mpampiasa indrindra Ireto manaraka ireto:
4 × 4 cm (karatra)
10 x 15 cm (io angamba no fahita indrindra rehefa mamorona sary, satria haben'ny karatra paositra)
Na izany aza, mihoatra ireo habe ireo dia misy bebe kokoa, na dia indraindray aza dia ilaina ny mpanonta printy manokana izay afaka manao pirinty lehibe kokoa.
Misy fiantraikany amin'ny kalitaon'ny sary ve ny famahana sy ny megapixels?
Iray amin'ireo tahotra lehibe, indrindra taona vitsivitsy lasa izay, ny fakantsary misy megapixel vitsivitsy naka sary ratsy kokoa noho ireo izay betsaka kokoa. Fa ny marina dia, na eo aza ny ady nisy teo amin'ireo mpanamboatra, ny marina dia izany na ny vahaolana farany ambany aza dia namokatra sary avo lenta, manitatra mihitsy aza.
Ankehitriny, tsy midika izany fa afaka mividy fakantsary megapixel ambany na finday ianao hahazoana sary avo lenta.
Tsy maintsy jerenao aloha izay famahana ny fakan-tsary, izay ny refy azon'ny sary alaina. Ohatra, raha milaza ny fakan-tsary hoe 24MPx, midika izany fa ny sary rehetra alainao dia hanana 24 tapitrisa pixel. Noho izany, arakaraka ny anananao no tsara kokoa. Na tsia. Eo no ilalaovana ny sela photosensitive an'ny sensor. Ireo no mitandrina amin'ny fanekena haavo maivana kokoa na latsaka, ka manome sary tsara kokoa.
Inona ny haben'ny sary azo atao pirinty?
Miankina amin'ny famahana ny sary (hita taratra amin'ny pixel) ary koa ny fanapahana ny mpanonta (taratra amin'ny dpi), misy raikipohy izay ahafahanao mahalala izay haben'ny pirinty ambony indrindra amin'ny sary.
Amin'ny ankapobeny, ny mety indrindra amin'ny sangan'asa dia ny sary manana vahaolana 300 dpi ary, raha endrika lehibe dia 600 dpi izany. Ireo mpanonta izay ananantsika ao an-trano, ireo mpanonta inkjet, dia saika manana vahaolana 300 dpi, izay ahafahan'izy ireo manonta sary.
Ny fampitahana, mba hahafahanao mahafantatra hoe inona ny haben'ny sary azo atao pirinty, dia ireto manaraka ireto:
Halavany (cm) habe indrindra = 2,54 x isan'ny teboka (piksel) / dpi vahaolana
Tsy midika akory izany hoe ny sary lehibe kokoa dia tsy azo atao pirinty, fa ny kalitaon'ny sary kosa mety hiharatsy. Ary izany dia miharihary maso, izay hahatonga azy hiseho manjavozavo kokoa na koa ny loko aza tsy ho avahana tsara.
Mazava kokoa aminao ve ny endrika fampandrosoana sy ny haben'ny sary?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » sary » Fampivoarana endrika sy haben'ny sary
Ahoana ny fampihenana ny haben'ny horonantsary
Ny fanapahana laser amin'ny metacrylate, safidy tsy mampino amin'ny karazana endrika rehetra